अमिताभ बच्चन सहित बलिउडका यि दिग्गज कलाकार नेपाल आउँदै, कारण यस्तो…. - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
अमिताभ बच्चन सहित बलिउडका यि दिग्गज कलाकार नेपाल आउँदै, कारण यस्तो….
महामारीको प्रभाव विस्तारै कम हुँदै गएसंगै बलिउड क्षेत्र चलायमान हुन थालेको छ । अब केही समय पछि भारतका दिग्गज कलाकार नेपालमा फिल्मको छायांकनका लागि आउने भएक छन् । यद्धपी नेपालमा भने फिल्म हल कहिले खुल्छ भन्ने थाहा छैन । नेपालमा बलिउड फिल्मको छायाँकनका लागि दिग्गज कलाकार नेपाल आउने भएका हुन् ।
स्रोतको हवाला दिँदै पिंक भिल्लाले लेखेको छ, सुरज बर्जात्यले फिल्म छायाँकनका लागि स्थानको खोजी गरिरहेको र उनको पहिलो रोजाइ नेपाल बनेको हो। उनीहरु नेपालमा ४०९४५ दिनसम्म छायाँकन गर्ने बताइएको छ।